A must-Have List of Content KWA B2B Business Needs Feed The Buyer's Journey | Martech Zone
Ọ na-eju m anya na ndị ahịa B2B ga-ebutekarị plethora nke mkpọsa ma mepụta iyi na-enweghị ngwụcha nke ọdịnaya ma ọ bụ mmelite mmekọrịta mmekọrịta na-enweghị nke kachasị dị ala, mepụtara nke ọma Ọbá akwụkwọ ọdịnaya na atụmanya ọ bụla na-achọ mgbe ị na-eme nchọpụta banyere ndị ha na ha ga-eso, ngwaahịa, ndị na-eweta ọrụ ma ọ bụ ọrụ ha. Isi nke ọdịnaya gị ga-eri nri gị ndị njem 'njem. Ọ bụrụ n ’ị… na ndị asọmpi gị…, ị ga-atụfu ohere gị igosipụta azụmaahịa gị dịka azịza kwesịrị ekwesị.
Gụkwuo Banyere Ọnọdụ nke Njem B2B
Na ndị ahịa B2B ọ bụla m na-enyere aka, a na m ahụkarị ọfụma na arụmọrụ ahịa ha na-abata mgbe anyị gosipụtara n'ụzọ doro anya n'ụzọ doro anya ọdịnaya ndị a:
Atụmanya chọrọ ịmatakwu nsogbu nke ha na-achọ ihe ngwọta tupu Ọ B looking na-achọ azịza. Inwe onwe gi dika ikike nke ghotara nsogbu di na nsogbu ya na ndi ahia bu uzo di ike iji wulite omuma banyere ika gi na mbu nke B2B Buying Journey.
Chọpụta nsogbu ahụ - Nye nkọwa bụ isi, ntụnyere, eserese, na ndị ọzọ na-enyere aka ịkọwa ihe ịma aka n'ozuzu ya.
Mepụta uru - Nyere atụmanya aka ịghọta -eri nke nsogbu ahụ maka azụmahịa ha yana ohere efu na azụmahịa ha ozugbo enwere nsogbu.
Research - Enwere ihe nyocha nke abụọ nke dechara ederede a ma nye nkọwa na nkọwapụta ọkọlọtọ banyere nsogbu ahụ? Gbakwunye data a na ihe ndị a na-eme ka onye zụrụ ahịa mara na ị bụ akụ nwere ihe ọmụma. Primary nnyocha bụ mma dị ka nke ọma often ọ na-emekarị na-akọrọ na ike na-ewulite mmata maka gị ika dị ka ndị na-azụ nnyocha a nsogbu.
Ihe Nlereanya: Mgbanwe Dijitalụ bụ usoro nke ụlọ ọrụ na-etinye ihe ngwọta dijitalụ n'akụkụ ọ bụla nke azụmahịa ha iji nweta uru nke usoro dijitalụ ma na-aga n'ihu ndị asọmpi. N'ime, enwere ego na akpaaka, data ziri ezi maka ime mkpebi ka mma na ngwa ngwa, nghọta zuru oke banyere ndị ahịa, iwe ndị ọrụ na-ebelata, yana nkwalite dị mma iji ghọta etu akụkụ ọ bụla nke azụmahịa si emetụta ahụike azụmahịa niile. Na mpụga, enwere ohere ịchụpụ njigide, uru ndị ahịa, yana ire ahịa niile yana ikike ịme nyocha ma bulie ahụmịhe ndị ahịa na ụzọ ọhụrụ na ụzọ ọhụụ. McKinsey enyewo nkọwa zuru ezu nke na-arụtụ aka na omume 21 kachasị mma n'ofe ndu, ike ikike, ndị ọrụ ike, nkwalite ngwaọrụ, na nkwukọrịta nke na-eme ka mgbanwe dijitalụ na-aga nke ọma.
Atụmanya nwere ike ghara ịma nsogbu niile dịịrị ha ma ghara ịghọta nke ọma ihe kpatara itinye ego na ntanetị ma ọ bụ ọrụ ga-abara ha uru. Ndepụta nke azịza n'eziokwu, nke zuru oke dị oke mkpa iji gwa ndị na-azụ ahịa ihe nghọta zuru oke nke nhọrọ ha na uru, ọghọm, na itinye ego maka ego ọ bụla. Ọzọkwa, nke a na-eme ka ikwenye gị n'isi mmalite nke usoro mkpebi ma na-enyere atụmanya aka ịghọta na ị ghọtara nhọrọ niile.
Na-eme Onwe Gị - N'inye nkọwa, otu onye ahịa ga-esi rụọ ọrụ ahụ n'onwe ya anaghị eme ka ha pụọ ​​na ngwọta gị, ọ na-enye ha nkọwa doro anya nke akụrụngwa na usoro iheomume dị mkpa iji rụzuo ọrụ ahụ n'onwe ha. Ọ nwere ike inyere ha aka kpughere oghere dị na talent, atụmanya, mmefu ego, usoro iheomume, wdg… ma nyere aka mee ka ha kwalite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị dị ka nke ọzọ. Gụnye ihe ndị ọzọ nwere ntụkwasị obi nwere ike inyere ha aka.
ngwaahịa - Teknụzụ ndị nwere ike inyere nzukọ ahụ aka ma too gị ngwaahịa na ọrụ gị kwesịrị ịkọwapụta nke ọma n'oge a. Ikwesighi ịkọwa ha na onye na-asọ mpi, mana ị nwere ike ikwu okwu n'ozuzu na otu ngwaahịa ọ bụla si enyere aka na-agbazi nsogbu ị kọwara na ọdịnaya njirimara nsogbu. Otu ihe zuru oke ebe a bụ na ị kwesịrị ịkọwapụta uru na ọghọm nke ngwaahịa ọ bụla, gụnyere nke gị. Nke a ga-enyere gị atụmanya na-esote ogbo, chọrọ ụlọ.
Services - atingkọwapụta na ị nwere ike ịrụ ọrụ ahụ ezughị. Inye nkọwa zuru ezu banyere ịbịaru na usoro ị na-enye nke a na-anwale oge na nke zuru ezu bụ ihe dị mkpa.
Ihe dị iche - Nke a bụ oge dabara adaba iche azụmahịa gị na ndị asọmpi gị! Ọ bụrụ na ndị asọmpi gị nwere ihe dị iche na ị na-efufu, nke a bụ oge dị mma iji belata mmetụta nke uru ahụ ha nwere.
Results - Inye akụkọ onye ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ ihe iji gosipụta usoro na usoro ihe ịga nke ọma nke usoro ndị a dị mkpa. Nnyocha isi na nke abụọ na ọnụọgụ mmeri, nsonaazụ a tụrụ anya, na ịlaghachi na itinye ego na-enyere aka ebe a.
Ihe Nlereanya: Ndị ụlọ ọrụ na-emejuputa ihe ngwọta na-atụ anya na ị ga-agbanwe ntụgharị dijitalụ, mana ngbanwe dijitalụ chọrọ ọtụtụ mbọ karịa n'ime nzukọ. Ndị ndu ga-enwerịrị ọhụụ doro anya banyere otu ụlọ ọrụ ha ga-esi rụọ ọrụ yana otu ndị ahịa ha ga-esi nwee ike ịmekọrịta ihe ozugbo ụlọ ọrụ ahụ ruru ọkwa nke mgbanwe dijitalụ.
O di nwute na, McKinsey na-enye data nke na-erughị 30% nke ụlọ ọrụ niile nwere ihe ịga nke ọma na ịgbanwe azụmahịa ha site na ntanetị. Companylọ ọrụ gị nwere ike ịgbanye talent iji nyere aka na usoro ahụ, gbanye ndị ndụmọdụ ka ha nyere aka, ma ọ bụ dabere na nyiwe ị na-emepe. Talentgba talent na-achọ ọkwa ntozu oke nke ọtụtụ azụmaahịa na-alụ ọgụ ebe ọ bụ na enwere nguzogide okike ịgbanwe n'ime. Ndị na-enye ndụmọdụ na-enyere aka azụmaahịa na mgbanwe dijitalụ ha ghọtara nke ọma ihe egwu, otu esi esi zụta zụta, otu esi eche ọdịnihu, otu esi akpali ma wulite afọ ojuju ndị ọrụ, ma dozie mgbanwe dijitalụ maka ịga nke ọma. Nzuzo na-enye aka mgbe ụfọdụ, mana nka ha na elekwasị anya anaghị eso ụlọ ọrụ gị, ndị ọrụ gị, ma ọ bụ ọkwa ntozu gị.
Na ọtụtụ iri afọ nke ahụmahụ, anyị mgbanwe ntanetị emeziwo usoro dị iche iche iji mee ka mgbanwe mgbanwe dijitalụ gị - gụnyere nchọpụta, atụmatụ, mmepe ọkachamara, mmejuputa, Mbugharị, ogbugbu na njikarịcha. N'oge na-adịbeghị anya, anyị gbanwere nzukọ ọrụ ebere mba, kwagara ma mejuputa ihe ngwọta nke ụlọ ọrụ, mepụta ndị ọrụ ha, ha wee nwee ike ịga n'ihu n'okpuru mmefu ego na oge nhazi, na-amata nloghachi ha na ntinye ego.
Dị ka obere ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ gị ga-abụ ihe kacha mkpa na ndị mmekọ anyị. Ndị isi ị ga - ahụ na ahịa ahịa bụ otu ndị ga - eme ka ị gbanwee mgbanwe dijitalụ gị.
Ọ bụrụ na ịnwere ike inyere ndị na-atụ anya gị na ndị ahịa aka dee ihe ha chọrọ, ị nwere ike ịga n'ihu asọmpi gị site na ịkọwapụta ike na uru ndị ọzọ ị na-arụ ọrụ na nzukọ gị.
ndị mmadụ - nye nghọta doro anya nke talent, ahụmịhe, na / ma ọ bụ iru eru dị mkpa iji dozie nsogbu ahụ. E wezụga onye Achọrọ, tinyekwara mgbalị dị mkpa iji dozie nsogbu ahụ. Ndị ụlọ ọrụ anaghị arụ ọrụ oge niile iji mejuputa mmejuputa iwu, yabụ ịtọlite ​​atụmanya n'ọkwa nke mbọ na otu ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị nwere ike isi belata enyemaka a na nzukọ ahụ.
plan - Jee olile anya gị site na usoro ị mepụtara na usoro ihe ngwọta iji hụ na ha nwere ike ịlele usoro iheomume yana akụ na ụba mmadụ na teknụzụ dị mkpa n'oge niile. Nyere ha aka ibute mmejuputa atumatu iji nweta nloghachi kasịnụ na itinye ego na mbu ma ha agaa n’ihu n’iru ogologo nke imezi nsogbu a.
n'ihe ize ndụ - Ọrụ Ọkwa ọrụ, usoro iwu nnabata, ikikere, nchekwa, ndabere-acha ọkụ, redundancy atụmatụ… ụlọ ọrụ mgbe iwu chọrọ kpọmkwem nsogbu ma gloss n'elu mbipụta nwere ike derail mgbalị ha na mmejuputa atumatu.
Ihe dị iche - Ọ bụrụ n’inwere uru dị mkpa na ndị na-asọ gị asọmpi, ekwesịrị itinye ya na ihe ndị a iji mee ka ebumnuche gị butere ya ụzọ. Ndị ụlọ ọrụ na-efukarị ma ọ bụ merie ohere dabere na otu nsogbu.
Ihe Nlereanya: download akwụkwọ akụkọ anyị zuru ezu na ndepụta maka otu esi agbanwe azụmahịa gị. N'ime ya, anyị na-akọwapụta akụrụngwa mmadụ, atụmatụ ebumnuche niile, yana otu esi belata ihe egwu nke ọdịda na mgbanwe dijitalụ gị.
Nhọrọ Ndị Na-enye Aka
Ebe obula ndi mmadu na acho ihe ngwọta, ahia gi aghaghi idi. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ nsonaazụ ọchụchọ maka mkpụrụokwu akọwapụtara, ị ga-etinyere. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ akwụkwọ ụlọ ọrụ, ị ga-enwerịrị ike ịnọ. Ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eme nchọnchọ ma chọta ihe ngwọta site na onye na-emetụta ihe, onye nrụpụta ahụ kwesịrị ịma maka ike gị. Na… ọ bụrụ na ndị mmadụ nyochaa aha gị na ịntanetị, ọ ga-enwerịrị ụzọ nke aro, nyocha, na akụrụngwa na-enye atụmanya ndị ahụ na ị bụ nhọrọ kachasị mma ha nwere.
Njikwa - you nọ ugbu a gafee ụgwọ niile a na-akwụ ụgwọ gị, ego a na-enweta, nkekọrịta, na nke ndị nwe ya? Ma ọ bụ nyocha YouTube nke nsogbu ahụ, akụkọ onye nyocha banyere ụlọ ọrụ gị, ma ọ bụ mgbasa ozi na-agbasa na akwụkwọ ọrụ… ị nọ ya?
Ịghọta - Ndi ndị ọzọ na-anabata gị maka asambodo, onyinye, echiche idu ndú, wdg. Nghọta ụlọ ọrụ niile na-enye ndị na-azụ ahịa obi ike na ntụkwasị obi ka ha na-enyocha ndị na-eweta ya.
Ntughari - you na-arụsi ọrụ ike nyocha na ịzaghachi okwu gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe, ọkwa, na nyocha nke ngwaahịa na ọrụ gị n'ịntanetị? Ọ bụrụ na ịnọghị na ndị asọmpi gị, ọ dị ka nzukọ ha ọ na-anabata ihe… ọbụlagodi na nyocha ahụ adịghị mma!
Personalization - Usoro ọmụmụ nke ahaziri iche na nke ndị ahịa dị mkpa maka ndị na-eweta ngwaahịa. Ndị na-azụ B2B chọrọ inwe obi ike na ị nyeere ndị ahịa aka dịka ha - nwere otu nsogbu ndị ha nwere. Ọdịnaya ezubere iche maka mmadụ ụfọdụ ga-adabara na onye ahụ nwere ike ịzụta ya.
Gụkwuo Banyere Mmekọrịta nke Personas na Asịwo Journeys na Ahịa Funnels
Enweghị ihe atụ iji gosi ebe a… nke a bụ nyocha zuru oke nke ndị na-ajụ ase na ọwa iji hụ na elere gị anya dịka ụlọ ọrụ B2B kachasị mma iji rụọ ọrụ.
Nkwado Ngwọta na Nkwekorita mmadu
A na-azụkarị ndị na-azụ B2B. Ọ dị mkpa na ị ga - enyere aka ikwukọrịta ihe kpatara ị ji bụrụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ziri ezi karịa onye na - eme nnyocha n'ime otu na - emecha mkpebi ịzụrụ.
Na-azụlite ya - Ndị ụlọ ọrụ anaghị enwe ego ma ọ bụ usoro iheomume iji tinye ego na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị ozugbo. Ha achọghịkwa ịkpọtụrụ ndị ahịa gị mgbe niile ebe ha mepere onwe ha ịrịọ arịrịọ. Inye akwụkwọ ọcha, nbudata, ozi ịntanetị, webinars, pọdkastị, ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ maka olile anya ị ga-aga n'ihu na-enweta metụrụ aka na enwe mmetụta na-enweghị irere dị oke egwu ka atụmanya na-aga n'ihu na-eduzi onwe ha na njem ịzụta ha.
Assistance - Ndị ụlọ ọrụ achọghị ka ere ha, ha chọrọ enyemaka. Ihe ọdịnaya gị ọ na-eme ka ndị mmadụ nwee ọrịre, ma ọ bụ na-enyere ha aka? Gị iche, chatbots, pịa-na-oku, ịtọọ oge a ngosi, wdg niile ga-haziri maka inye ha na enyemaka bara uru… bụghị hardcore ahịa. Azụmaahịa nke na-enye enyemaka kachasị na ịkụziri atụmanya na-abụkarị azụmaahịa na-enweta ohere.
Solutions - you nwere ike hazie a ngosipụta ngwaahịa na-na-na-na na nzukọ na ị na-achọ na-ere ka? Izingmepụta ihe ngosi ma ọ bụ ịmepụta ihe ngwọta nwere ike inyere otu aka iji anya nke uche ihe ngwọta ị na-eweta na tebụl. Inye ihe nchoputa ma obu itinye okwu mmeghe nwere ike mee ka ikwuputa ngwa ahia ma obu oru aka gi.
Mepụta nloghachi na ego - Inyere olile-anya gi aka ịmara uru mgbe ị na-akọwapụta nsogbu ahụ, na-agagharị na ha, wee na-enye ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ gị ihe ngwọta kwesịrị ekwesị ugbu a ka ị nyere ha aka ịghọta ego na nlọghachi ya. Nke a nwedịrị ike ịgụnye ikike ịhazi, ọnụahịa, na ikwu okwu na usoro ọrụ onwe onye n'ịntanetị.
N'oge a, ọdịnaya gị kwesịrị ịgbakọta ya niile na onye ị na-achọ ịzụ ga-aghọta nke ọma ma ihe ngwọta gị ọ kwesịrị ha. Ndị ọchụnta ego na-atụkarị ụjọ imebi olileanya ọ bụla na-atụ anya na ndị na-ere ahịa ha na-ebili iji zụọ ya. Nke ahụ bụ nnukwu ibu ma kwesiri izere ya. Branddị gị ga-ewulitekwu ntụkwasị obi site na ịtụmanya atụmanya na nri azịza, ọ bụghị site n'ịgbalị ịre onye ọ bụla ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị!
Mgbe ị na - enyere ndị na - azụ ahịa aka dịka nke a, ị ga - eme ka ọdịiche dị n’etiti ndị ahịa tozuru etozu (MQLs) na ndị ahịa tozuru etozu (SQLs), na - enye ndị na - ere gị ohere inweta ya. nri asịwo gafee agbaru ọsọ ọsọ.
Tags: ikikeb2bb2b ọdịnayandepụta b2bndị na-azụ ahịa njemikpe ọmụmụotutu mmadu kwenyereatụmatụ ịre ahịa ọdịnayaichensogbu nsogbummataahachọrọ ụlọn'ihe ize ndụnyocha nghotankwado nkwadonhọrọ soplayaakwụkwọ ọcha
Douglas Karr Friday, April 23, 2021 Friday, May 7, 2021
Ingkụzi Freemium Ntughari Pụtara Serdị Mkpa Banyere Nchịkọta Ngwaahịa